TuLotero waxay barnaamijkeeda cusub ee muddada dheer la sugayay ku soo bandhigtay Google Play | Wararka Gadget
TuLotero waxay barnaamijkeeda cusub ee ay in badan sugaysay ku soo bandhigaysaa Google Play
Miguel Hernández | 02/06/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 31/05/2021 11:37 | Aplicaciones
TuLotero ayaa iskeed isu taagtay tan iyo dhalashadeedii 2014 oo ahayd bixiyaha ugu weyn ee internetka ee bakhtiyaa-nasiibka iyo sawirada Isbaanishka, sidaa darteed xitaa shirkadaha waaweyni waxay ugu dambeyntii u wareegeen qaabka dijitaalka ah ee TuLotero xitaa Bakhtiyaa-nasiibka Kirismaska ​​ee sannad kasta la qabto.
Codsiga cusub ee TuLotero ayaa laga bilaabay Google Play Store si uu noogu soo bandhigo khibrad dhameystiran oo kuu oggolaan doonta inaad u maamusho bakhtiyaanasiibkaaga sidii hore. Riwaayadaha cusub ayaa si dhakhso leh looga dhigay iyagoo u mahadcelinaya naqshadooda cajiibka ah, iyagoo siinaya khibrad gebi ahaanba dhameystiran oo shaqsiyeed oo lagu maareeyo bakhtiyaa-nasiibkayaga oo dhan.
1 Abka la cusbooneysiiyay ee ay filayaan isticmaaleyaasha
2 Faa'iidooyinka codsiga TuLotero
3 Ka ciyaar TuLotero oo hel € 1 BILAASH
Abka la cusbooneysiiyay ee ay filayaan isticmaaleyaasha
Codsiga TuLotero waxaa si buuxda looga heli karaa Google Play Store oo loogu talagalay qalabka Android, halkaas oo ay ugu dambayntii beddelayso nooca Lite ee TuLotero in ilaa hada la heli karay taasna waxay lahayd awood aad u kooban. Codsiga ku jira qaabkiisa Lite ayaa kaliya loo oggol yahay inuu kaydiyo tikidhada oo uu arko natiijooyinka, isagoo lagama maarmaan u ah inuu kala soo baxo .APK websaydhka TuLotero.
Ku soo dejiso TuLotero Google Play
Haddii aad leedahay iPhone, sidoo kale waxaa laga heli karaa App Store.
Hadda, la qabsiga siyaasadaha cusub ee Google, TuLotero waa la cusbooneysiiyay si ay u bixiso nooc buuxa oo codsi ah oo aad ku soo dejisan karto bilaash, kaliya maahan Google Play Store, laakiin sidoo kale waxaa laga heli karaa iOS App Store iyo Huawei App Gallery.
Markii la bilaabay, Codsiga TuLotero wuxuu ku guuleystey inuu ku dhuunto Top 6 ee qiimeynta adduunka ee codsiyada iyo 2-da madadaalo ee ka dhex jira Google Play Store, iyadoo si aqlabiyad leh ay ku aqbaleen dadka isticmaala ee siiyay celcelis ahaan 4,8 xiddigood 5-ta suurtagal ee nidaamka qiimeynta Google, waana wax markhaati u ah waxqabadka wanaagsan iyo isdhexgalka wanaagsan ee isticmaalaha isticmaale ee hadda bixiya TuLotero.
Sidan oo kale, adigoo si buuxda loogu dhex daro Google Play Store iyo inta kale ee ugu badan dukaamada codsiyada adduunka, waxaad awoodi doontaa inaad hesho cusbooneysiin joogto ah oo aad mar walba ku hayso arjiga nooca ugu dambeeya, Tani waxay noqon doontaa badbaado aad muhiim u ah oo lagu daray, taasi waa sababta ka timid Actualidad Gadget waxaan kugu boorinaynaa inaad ku deg degto inaad ka soo degsato TuLotero dukaanka aad ka hesho ee aad jeceshahay si aad si buuxda uga faa'iideysato awoodaha is-dhexgalka cusub ee dhammaystiran uu siinayo dadka isticmaala TuLotero.
Faa'iidooyinka codsiga TuLotero
Codsiga weli waa nooc isku dhafan oo ah awoodaha websaydhka TuLotero laakiin si buuxda ugu dhex jira calaacasha gacantaada. Taasi waa sababta aad hadda awood ugu yeelan doontid inaad si isku mid ah uga wada ciyaartid taleefankaaga gacanta iyo kombiyuutarkaaga, halkaasoo ay kugu habboon tahay mar walba. Waxaa intaa dheer, waxaad awoodi doontaa inaad ka faa'iideysato xaqiiqda ah in codsigu gebi ahaanba bilaash yahay, waxaa ka maqan guddiyo iyo ogeysiisyada riixa ayaa kuu oggolaanaya inaad ogaato natiijada riwaayadahaada isla markiiba, Haddii aad ku taajirto TuLotero waad ogaan doontaa kahor qof kasta, miyaadan u maleyneynin inay faa'iido tahay?
Adeegsiga TuLotero wuxuu sidoo kale kuu oggolaanayaa inaad tikidka la wadaagto asxaabtaada diiwaangashan kaliya hal guji, si lamid ah ma waayi doontid tigidhkaaga, Uma baahnid inaad qarisid tigidhkaas qaaliga ah ee guuleysta, way kugu filnaan doontaa inaad gasho TuLotero maaddaama tigidhka lala xiriirinayo taleefankaaga gacanta.
Sida had iyo jeer ah, waxaad awoodi doontaa inaad sii wadato iibsashada tikidhadaada, inaad si dhaqso ah uga qayb gasho kooxaha iyo naadiyada, adigoo abuuraya kooxo ilaa 100 qof ah si ay u wada ciyaaraan, isku dheelitirnaanta kooxdaas la sheegayo. Intaa waxaa dheer, TuLotero waa 100% ammaan, tan iyo sharadka waxaa ka shaqeeya maamulada rasmiga ah ee Bakhtiyaanasiibka Gobolka iyo Shabakadda Khamaarista, markaa tikidhadaadu waxay lamid yihiin kuwa waraaqda lagu iibsaday.
Sidan oo kale, waxaad awood u yeelan doontaa inaad tikidhadaada ku soo dalacdo guddi la'aan isla markiibana si toos ah ugu shubto koontadaada bangiga, sidaa darteed qarsoodi ayaa la hubinayaa, waa tallaabo kale oo nabadgelyo oo lagu xisaabtamayo. In ka badan 500 oo Maamulka Bakhtiyaanasiibka Isbaanishka ah ayaa horeyba ula xiriiray TuLotero waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ku ciyaarto lambarada aad doorbideyso adigoo si toos ah ugu diiwaangelinaya iyo sidoo kale hawlgalinta maamulka Bakhtiyaanasiibka Kirismaska ​​sida shirkadaha waawaynba horeba u sameeyeen.
Ka ciyaar TuLotero oo hel € 1 BILAASH
Haddii aad iska diiwaangeliso arjiga TuLotero oo aad fursad u hesho inaad gasho «Newsgadget» Sanduuqa dhexdiisa "Waxaan hayaa koodh" ee diiwaangelinta arjiga, Waxaad si otomaatig ah u heli doontaa € 1 oo aad ku bixin karto nooca bakhtiyaanasiibka aad rabto maaddaama si toos ah loogu dari doono koontadaada isticmaalaha. Ha iloobin inaad qorto lambarkaaga oo aad uga faa'iideysato fursaddan gaarka ah inaad ku ciyaarto gebi ahaanba bilaash oo aad si qoto dheer u ogaato khibrada TuLotero.
Intaas waxaa sii dheer, Khamiista soo socota, Juun 4, 2021 waxaa jira Super Jackpot cusub oo jimcaha weyn leh oo leh 130 milyan oo euro abaalmarinta koowaad. In TuLotero waxay horey u siiyeen abaalmarinta koowaad ee maalintan qaaska ah bishii Sebtember ee sanadkii hore oo ka socda mid ka mid ah 500 maamul ee la xidhiidha TuLotero, gaar ahaan Maamulka 29 ee Valladolid.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Aplicaciones » TuLotero waxay barnaamijkeeda cusub ee ay in badan sugaysay ku soo bandhigaysaa Google Play
Anker PowerConf C300, kamarad casri ah iyo natiijo xirfad leh